Lapho umbhangqwana unquma ukuba ingane, indoda kanye nowesifazane ngokuvamile kuphakama umbuzo mayelana nokuthi igazi labo RH ehambisanayo. U-Adalberto isikhathi eside, odokotela nososayensi waziphatha ucwaningo lezi izinkomba. Lesi sihloko uzokutshela ngalokho has RH kwedivayisi. Uzothola lapho izimo Akubalulekile ukhathazeke yokuthi amasosha omzimba kukhiqizwa amangqamuzana egazi. Kubalulekile ukusho ukuthi i-Rhesus isici ukungqubuzana phakathi nenkathi yokukhulelwa.
Kuyini RH negazi labantu?
RH igazi - iyona khona noma ukungabi khona iprotheni ku ulwelwesi lwamangqamuzana egazi abomvu. Ezimweni eziningi, kuba khona. Yingakho amaphesenti angu-80 abantu abaya Rhesus omuhle. Mayelana 15-20 amaphesenti abantu babe abanikazi igazi ezimbi. Lokhu akuyona abanye uhlobo egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ososayensi ukhuluma ngani yokuthi laba bantu ikakhulukazi kule minyaka yamuva.
RH isici: Oluvumelana
Adalberto isikhathi eside baba ulwazi eyaziwa anjani igazi is kuhlangene kahle, nezinye izinhlobo zayo zingekho. Ukuze abale ukuhambisana Rhesus isici ngoba owesifazane ebamba noma iyiphi enye injongo, sicela ubheke i-amatafula. Basuke eyethulwe ukunakwa kwakho kulesi sihloko. Kuye ngalokho ofuna ukubona ku ukuhambisana idatha zingahluka. Cabanga izimo lapho kwedivayisi saziwa RH izici, futhi uma kungenjalo.
RH ehambisanayo igazi donor uma ukulethwa kuyoba kulezi zimo ezilandelayo. Umuntu nge value esihle (uma ekhona erythrocyte kangaka okuthiwa amaprotheni) izophela indaba for abantu ezimbi. ukumpontshelwa ezihlala egazini kubo bonke abamukeli, kungakhathaliseki banayo RH.
RH kwedivayisi azinikeza lapho donor unikeza ukwaziswa okungajabulisi umuntu omuhle. Kulokhu, ukushayisana sina lamaseli kungenzeka. Kuwufanele ukukhumbula ukuthi ngesikhathi ukumpontshelwa izincwadi ezidingekayo ukuze cabanga ukuhambisana iqembu igazi futhi RH isici. Yilokho okwenza ochwepheshe abanolwazi ezindongeni ezikhungweni zezempilo.
Lokubaluleke kakhulu yilona ukuhambisana we RH izici abazali umntwana esikhathini esizayo. Imibhangqwana eminingi ngephutha sikholelwe ukuthi lamagugu zincike ematfuba nje ebamba isisu. Ngakho, yesikhathi eside nenzalo simbe owesilisa nowesifazane kanye nengane kuthiwa kubangela iqembu igazi RH sokusebenzisana. Lena neze iqiniso.
Akunandaba ukuthi kukhona amaprotheni ku amaseli abangaki azibandakanya nabo kwezocansi kwamangqamuzana egazi abomvu. Leli qiniso akuphazamisi amathuba kokukhulelwa. Nokho, uma ukuvundisa ukusungulwa yokuthi yokukhulelwa le RH isici (ukuhambisana Inkomba yayo uyise nonina) edlala indima ebalulekile. kungathinta kanjani ukubaluleka ingane esikhathini esizayo?
Uma umuntu akanayo amaprotheni ku amaseli abomvu egazi, ukuthi kwande ukuthi kube kuphakama akunangozi. Kulokhu, owesifazane anganawo ungaba muhle kumbe ube mubi. Leli qiniso ngokuphelele ukuthi ayibalulekile.
Lapho RH owesifazane omuhle, indoda idatha igazi akukho aqakatheke kakhulu. Ubaba umntwana esikhathini esizayo anivunyelwe ukuhlaziywa izibalo.
ukungqubuzana okungase kube khona
Ukuhambelana Rhesus izici abazali kungase kube kabi lapho owesifazane indoda engemihle futhi omuhle. Ngesikhathi esifanayo idlala indima enkulu, ogama ukusebenza usezuze umntwana esikhathini esizayo. Okwamanje, kukhona ezinye izifundo wegazi kwabakhulelwe. yi wabo baze babe amaphesenti angu-90 egazi womntwana ukusungula ungubani. Futhi ngesikhathi sokukhulelwa besifazane nge RH-negative atuse ukuba kwenziwe ukuhlola igazi ukucacisa khona kwamasosha omzimba. Lokhu kusiza ukuvimbela ingxabano futhi uyibambe ngesikhathi ukuvimbela.
RH isici: ingxabano ekukhulelweni
Phakathi ukuzalwa abesifazane abaningi babhekana nezinselele ezihlukahlukene. Omunye wabo aluhambisani igazi iqembu futhi RH isici. Empeleni, lokho akusho yini igazi (iqembu) e umama okhulelwe ezibalulekile. Okuningi Okubaluleke kakhulu ukuba khona noma ukungabi wamaprotheni ku amaseli erythrocyte abakhulelwe.
Nangabe umuntu wengubo RH engemihle futhi indoda (Uyise womntwana esizayo) is positive, ukushayisana kungenzeka. Kodwa lokhu kuzokwenzeka kuphela uma ingane ekhulayo usezuze impahla igazi likayise.
iyona inkinga kanjani?
Isesekeli ingane igazi likalwa ezingeni kakhulu le ekuqaleni sokukhulelwa. Mayelana 12 amasonto, i-fetus eba ngokuzimela sibonga isenzo progesterone. Engxenyeni sokukhulelwa yesibili kukhona ukuxhumana okuqhubekayo kanye lokushintshisana mutual izidakamizwa phakathi kukamama usana olungakazalwa. Igazi owesifazane futhi ingane asisho abophe omunye komunye. Nokho, ngemva enkabeni intambo ingane ithola ukunakekelwa okufanele wonke umsoco nomoya-mpilo. Unika kuye yezingxenye ezingadingekile, okungaba khona uwedwa futhi abomvu egazi. Ngakho, amaprotheni atholakala egazi udle ngu umama okhulelwe. Isimiso sakhe kwegazi akukhona uyazi lesi sici, futhi ephatha ke njengoba nomzimba angaphandle.
Ngenxa yalolu hlelo, emzimbeni owesifazane okhulelweyo eba amasosha omzimba. Basuke okuhloswe ngaso ukubhujiswa i amaprotheni engaziwa futhi iwukudambisa wesenzo. Njengoba ejenti kakhulu kusuka kumama kuya umbungu ihlinzekwa ngokusebenzisa umzanyana, indlela efanayo omzimba ku ingane umzimba.
Yini esongela ukungqubuzana Rhesus?
Uma owesifazane eke sekwakhiwe igazi kukhona amasosha omzimba efanayo ngokushesha bathole futhi ingane. Ngokulandelayo, uqale ukubhubhisa izidakamizwa ababengamazi amaprotheni, ababhubhise evamile elibomvu egazi kid. Umphumela walesi kungenzeka, izifo eziningi azalwa naso noma yezinkinga fetus.
Ngokuvamile izingane abaye Rhesus ezingqubuzana nonina, ukuhlupheka jaundice. Kuthiwa lokhu inkinga buya omunye engalimazi kakhulu. Ngo ukubola abomvu egazi ashaye igazi bilirubin womntwana Kumiswa. Nguye kubangela yellowing kwesikhumba futhi nolwelwesi lwamafinyila.
Ngemva kokuzalwa kwengane nge RH ukungqubuzana ngokuvamile atholakala isifo sesibindi, inhliziyo kanye ubende. Pathology kungase kube lula ukulungisa noma izinto ngokungathi sína ngempela. Konke kuncike isikhathi isinyathelo okubhubhisa masosha omzimba isidumbu sengane.
Ezimweni ezingavamile, RH ukungqubuzana sokukhulelwa kungaholela ukuzalwa izingane ezifile noma ukufa fetus.
Yiziphi izimpawu lezo zinkinga?
Kungakhathaliseki kungenzeka ukufunda okuthile mayelana nokuthuthukisa Rhesus ingxabano phakathi nenkathi yokukhulelwa? Ezimweni eziningi, le zokugula ukutholwa umphumela ukuhlolwa igazi. umama ngamunye okhulelwe, has amagugu negative Rhesus kumelwe athathe njalo impahla emithanjeni ngoba uyayazi imbangela. Uma umphumela wabonisa khona amasosha omzimba emzimbeni, odokotela ukuthatha izinyathelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa isimo umntwana.
Futhi esolwa Rhesus ukungqubuzana ngesikhathi sokukhulelwa ivumela ultrasound evamile. Uma, ngesikhathi Uchwepheshe zokuxilonga kuthola usayizi lelitfutfukile izitho ezifana sesibindi ubende, kungenzeka ukuthi inkinga iye yasungula force egcwele. Futhi uphethwe ingase ibonise zokuzikhukhumeza umzimba wengane lonke. Lokhu umphumela kwenzeka ezimweni ezimbi kakhulu.
Ukulungiswa Rhesus ingxabano ngesikhathi sokukhulelwa
Ngemva uzingela zokugula kudingeka soberly ukuhlola isimo umntwana ongakazalwa. Ngezindlela eziningi, le mishanguzo ukwelashwa kuncike isikhathi yokukhulelwa.
Ngakho, lapho usaqala (amasonto 32-34) esetshenziswa ukumpontshelwa igazi kwabesifazane. Yena zifakwa emzimbeni material amasha ukuthi ubumbe amasosha omzimba. Kuyinto umonakala igazi yengane nje aphume emzimbeni. isikimu okunjalo ngokuvamile eyenziwa kanye ngesonto kuze ukulethwa ekugcineni.
Ngo sokukhulelwa kamuva, kungenzeka uthathe isinqumo sokuthi i kwesigaba esiphuthumayo caesarean. Emva kokuzalwa ukulungiswa isimo somntwana. Ezimweni eziningi, le mishanguzo ukwelashwa kuhlanganisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukwelashwa ngokomzimba, ukuchayeka amalambu aluhlaza, kanjalonjalo. Ezimweni ezimbi kakhulu, ukumpontshelwa igazi owayesanda kuzalwa.
Ukuvimbela RH ukungqubuzana sokukhulelwa
Kungenzeka yini ukuba ngandlela-thile ukuvimbela ukuthuthukiswa isifo? Yiqiniso, yebo. Okwamanje, kukhona yimithi elwa amasosha omzimba kwakhiwa.
Uma ekhulelwe kuqala, bese ematfuba ukuthuthukiswa RH ukungqubuzana incane. Ngokuvamile, amangqamuzana egazi abomvu akuhlangani. Nokho, ngesikhathi sokubeletha kwenzeka kumiswa ngenakugwemeka kwamasosha omzimba. Yingakho kubalulekile ukuba ukwethula kuyindlela yokuvimbela izinsuku ezintathu ngemva kokuzalwa kwengane RH omuhle kusuka kumama ezimbi. okunomthelela esinjalo sasiyobonisa ligweme izinkinga ezingase zivele e ukukhulelwa esizayo.
Yini ongayenza uma isikhathi elahlekile futhi kufika lokuzalwa esilandelayo? Kungenzeka yini ukuba ngandlela-thile ukuvikela ingane kusukela ingqubuzana? umama okhulelwe kulokhu kunconywa ukuqapha njalo isimo ngegazi assays ezivamile. Indaba okungenhla kumane is busuka umzimba nokuthumba owesifazane owayezithwele, esikhathini mayelana 28 amasonto. Lokhu kukuvumela ukwenza ingane ukuba eside ngaphandle izinkinga.
Manje usuyazi ukuthi kubukeka kanjani ithebula kwedivayisi amaqembu igazi isici Rhesus. Uma ungenalo ukuthi amaprotheni efanayo amaseli abomvu egazi, okufanele qiniseka yazisa udokotela. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, sesifunda sakho sempilo nokuziphatha umbungu kuyoba ngaphansi kolawulo ekhethekile. Lokhu kuzovimba okuvela Rhesus ukungqubuzana, noma ngendlela esifike ukwenza zokuvimbela yayo. Ngifisa sengathi ngabe impilo!
Izifo eziyingozi: umdlavuza isisu 4 degrees, futhi umdlavuza pancreatic.